Monday February 03, 2020 - 19:22:12 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ku dhowaad 15 qof Kenyaan ah ayaa dhimatay kadib markii ay dhibaato ka dhacday mid kamida Iskuullada ugu waaweyn wadankaasi.
Saraakiisha Booliska Kenya ayaa xaqiijiyay in ugu yaraan 13 qof ay dhinteen kadib markii ay isbuurteen Arday ku sugnaa iskuul Waxbarasho.
Ardayda ayaa isbuuratay maanta gelinkii dambe xilli ay ku sugnaayeen dugsiga hoose ee degmada Kakamega, maamulaha iskuulka ayaa warbaahinta u sheegay in Ardayda dhimatay badankood ay kasoo dhaceen dabaqa sare ee iskuulka kadib markii isbuurashadu ku dhax baahday sufuufta ardayda.
Wararka ayaa intaas ku daraya in 19 qof oo kamid ah 39-ka ku dhaawacantay isbuurashada ay xaaladooda caafimaad aad uliidato waxaana loo qaaday Isbitaallada magaalada Nairobi.
Arrintan ayaa loo aanaynayaa dayacaadda ay wasaaradad Waxbarashada Kenya ku sameysay goobaha waxbarashada kadib markii ay dhintay miizaaniyaddii loogu talagalay waxbarshada oo dhanka amniga loo weeciyay.
Goobaha Waxbarashada Kenya ayaa ah kuwa aad udayacan waxaana boqolaal Arday laysugu geeyaa fasallo ciriir ah, iskullada qaar malahan wax musqula ah taas oo sababta in Ardaydu ay udhinteen cudurka shubanka
Diyaarado Melleteri oo ku burburay Koonfurta wadanka Afghanistan.